Muqdisho: Dagaalo Laysku Muquuniyay, Al-shabaab Oo Qirtay In La Dilay Hogaamiye Lubnaani Ah Oo Geesiyaashooda Ahaa Iyo Koox Ay Sheegeen Inay Jihaad Ka Bilaabay Gudaha Kenya – Araweelo News Network (Archive)
Muqdisho: Dagaalo Laysku Muquuniyay, Al-shabaab Oo Qirtay In La Dilay Hogaamiye Lubnaani Ah Oo Geesiyaashooda Ahaa Iyo Koox Ay Sheegeen Inay Jihaad Ka Bilaabay Gudaha Kenya
Muqdisho (ANN) Dagaalyahanka Al-shaabaab oo dagaalo xooggani ku dhexmarayaan tan iyo Jimcihii Magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Koonfurta Somalia ciidamada dawladda taagta daran ee ay taageeraan AMISOM, iyo kuwa Kanya ayaa shaaciyay in weerar
dhinaca cirka ah lagu dilay hogaamiye u dhashay dalka Lubnaan oo ka mid ahaa muhaajiriinta ka dhinac dagaalama Al-shaabab.
Afhayeenka Al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage ( Cali Dheere )ayaa goordhawayd sheegay inuu Shahiiday Sheekh Bilaal Al-Burjaawi oo kamid ahaa Mujaahidiinta u tegey Somalia inay ka barbar dagaalamaan Al-shabaab..
Sheekh Cali Dheere wuxuu sheegay in Sheikh Bilaal oo ku dhintay weerar dhinaca cirka ah oo lala beegsaday uu kasoo haajiray wadanka Lubnaan ee bariga dhexe, isla markaana uu caan ku ahaa geesinimo iyo in uu abaabulo shabaabka Mujaahidiinta Somaaliya ee saaxada ka dagaalamaya. Afhayeenku ma sheegin duqaynta diyaarada geystay ee lala beegsaday Sh. Bilaal dalka laga laahaa.
Hase yeeshee waxa la ruaysan yahay inay diyaarada lagu weerary oo ahayd kuwa is wada ee lagu hago rimuutka inay kasoo kacday saldhig dhinaca cirka ah oo Maraykanku ku leeyahay Koonfurta dalka Ethiopia, iyadoo ay diyaaradaha aan cidna wadin weeraro sidan oo kale ah ka fuliyeen koonfurta Somalia marar baddan, kuwaas oo ay ku bartilmaameedsanayaan saraakiisha sare ee Al-shabaab.
Hogaamiyaha la dilay oo la rumaysanyhay inuu ahaa ninka labaad ee xaggaa derejada ku xigay Fazul Abdallah oo ahaa hogaamiyihii Al-Qaeda ee Somalia, kaas oo lagu dilay magaalada Mogadishu June 2011.
Sheekh Al-Birjewi oo ku sugnaa Somalia ilaa 2006, markii ay maxkamaddii Somalia dagaalka la galeen ciidamadii Ethiopia, wuxuu hore ugu dhaawacmay July 2011, duqayn dhinaca cirka ah oo isaga iyo koox uu ku jiray lala beegsaday, iyagoo ku sugnaa duleedka magaalada Kismaanyo, balse waxa lagu soo daweeyay dalka Kenya.
Dhinaca kale weerarada iyo dagaalka u dhxeeya Ciidamada AMISOM oo taageeraya kuwa dawladda taagta daran iyo Al-shabaab ayaa ka socday ilaa habeen hore magaalada Muqdisho. Kadib markii ay Al-shabaab weerar ku qaadeen fadhiisimo ay deganaayeen ciidamada ka socda Uganda. Alshabaab ayaa sheegatay inay guulo ka gaadheen dagaalkaa oo ay ku dileen dersin ka mid ah askarta Uganda, kuwaas oo ay maydadkooda soo bandhigeen. Sidoo kale waxay sheegeen inay weerarkaa ku dileen saraakiil ka tirsan madaxtooyada villa Somalia.
Laakiin afhayeenka ciidamadaUganda ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin guulaha ay Al-shabaab sheeganay, iyadoo ay saaka ciidamada AMISOM, weeraro ku qaadeen deegaanka dayniile oo ay saldhigyo ku laahaayeen al-shabaab dagaalkaa oo aan khasaarihiisa si cad loo ogayn, waxay Al-shabaab ku sheegtay in laga qabsaday meelo ay hore u joogeen, balse ay weeraro cusub qaadayaan si ay uga saaraan halkaa ciidamada Uganda oo ay sheegeen inay khasaare weyn gaadhsiiyeen.
Dagaalada ka socda hada Muqdisho ayaa noqonaya kuwii ugu cuslaa ee ka dhaca halkaa wixii ka danbeeyay dabayaaqadii sanadkii 2011, markii ay Al-shabaab sheegeen inay ka baxeen magaalada Muqdisho.
Waxayna dagaaladani kusoo beegmeen iyadoo ay duqaymo dhinaca cirka ah iyo weeraro ka wadaan gobolada jubooyinka iyo geddo ciidamada Kenya eek u sugan Somalia iyo diyaaradaha Maraykanka ee aan cidna wadin, kuwaas duqantooda ku dilay maanta Hogaamiye ka tirsnaa al-Qaida-da Somalia.
Al-shabaab ayaa dhinaceeda wada abaabulo ay ku doonayso in dagaalka la geliyo gudaha dalka Kenya, iyadoo ku dhawaaqday inay maalmaha soo socda koox ay ugu yeedhay jabhada mujaahidiinta, kuwaas oo sida ay sheegeen ay gudaha Kenya ka wadaan abaabul koox ay ka magcaabeen Cadnaan Muuse iyo Jaabir Kaalle oo udhashay dalka Kenya. Sidoo kalena waxay sheegeen inay ku sugan yihiin ragaasi magaalooyinka waaweyn ee Kenya oo ay wadaan sidii isugu xidhi lahaayeen dhalinayarada dalka Kenya ee muslimiinta ah.
Al-shabaab waxay sheegtay in labadaa sarkaal ay ahaayeen ardaydii uu wax soo baray Macalin Saalix Nabhaan Sheekh Axmed Iman oo laga yaqaano gudaha magaalada Nairobi, kaas ooh ore u iclaamiyay dagaal jihad ka dhan ah Kenya. Ka hor intii aan lagu dilin weerar dhawr sano ka hor. Si kastaba ha haatee abaabulka xiligan ee Al-shabaab ayaa u muuqda mid ay doonayaan inay dagaalka kaga furan dhinaca dalka Kenya u celiyaan gudaha, isla markaana ku fidiyaan mujtamaca geeska afrika oo diimaha kala duwan haysta.
Published January 21, 2012 By info
Senior foreign fighter killed in Somalia and intensifies fighting as African Union troops make gains in Mogadishu
Hanbalyo Meher Wacan C/llaahi C/raxmaan Xaaji Cismaan iyo Saynab Ismaaciil Jaamac